ယခုလ ဂြူလိုငျ၊ ၂၀၂၀ခုနှဈအတှကျ ခုနှဈရကျသားသမီး တဈလဟောစာတမျး။ – Shangyimm
ယခုလ ဂြူလိုငျ၊ ၂၀၂၀ခုနှဈအတှကျ ခုနှဈရကျသားသမီး တဈလဟောစာတမျး။
Posted on July 2, 2020 July 2, 2020 by SHANGYI
ဤ အခြိနျသညျ အမှားအမှနျ၊ အကောငျးအဆိုးကို ခှဲခွားရခကျသောကာလ ဖွဈသညျ၊၊ ရှတေို့းရအခကျ၊ နောကျဆုတျရအခကျ ပွဿနာမြား ကွုံရတကျသညျ။ အရာရာသတိထား၍ လုပျကိုငျမှ တျောကာကွသညျ၊၊ ယခုခြိနျမှစ၍ မိမိလုပျဆောငျမညျ့အရာအားလုံးကို အကှကျခပြီး လုပျဆောငျရနျ ကွိုးစားသငျ့သညျ၊၊ မိမိ၏ ဇှဲ၊ လုံ့လပျေါမူတညျ၍ အောငျမွငျလိမျ့မညျ၊၊ စကားအပွောဆို ဆငျခွငျသတိပွုရပါမညျ၊၊ နှုတျကွောငျ့သေ၊ လကျကွောငျ့ကွေ…တတျသော ကာလဖွဈ၍ နှုတျမထိနျးပါက ကွီးစှာသော ဥပဒျဖွဈတကျသညျ၊၊ ငှမြေားဝငျသောလညျး အဖတျမတငျတကျပေ၊၊ အလိုလိုနရေငျး စိတျအားငယျတကျသောစိတျ၊ တကျလှယျကလြှယျသောစိတျကို အမွနျဆုံးပွုပွငျပါလေ။ မိမိ မလုပျခငျြ မဖွဈခငျြသောကိစ်စကို တဈစုံတဈယောကျမှ အတငျးအကွပျ၊ ဇှတျလုပျခိုငျးခငျြးခံရတကျသညျ၊၊ လူငယျလူရှယျမြားအနဖွေငျ့…မခဈြသငျ့သူကို ခဈြခွငျး၊ အခဈြမှား ဆုံးဖွတျခကျြမှားခွငျးမြားကွောငျ့ မလိုလားအပျသောပွဿနာမြားနှငျ့ ထိပျတိုကျကွုံရတကျသညျ၊၊ ကနျြးမာရေးအနဖွေငျ့…အနအေထိုငျ မဆငျခွငျမှုကွောငျ့ ရောဂါဝဒေနာမြားကွရောကျ တကျသညျ၊၊မကျြစိ၊မကျြနှာ၊မကျြလုံးနဲ့ပကျသတျပီး ဂရုစိုကျရပါမညျ၊၊
တဈလတာယတွာ- အိမျဘုရားမှာ ထောပတျဆီမီးခှကျ ၃ခှကျ ပူဇျောပေးပါ။ ဘုနျးကွီးကြောငျး၊စာသငျကြောငျးမြားတှငျ ရအေိုးစဉျလှူပေးလိုကျပါ၊၊
အိမျအသဈဆောကျမညျ့ကိစ်စ အဆငျပွအေောငျမွငျမညျ။ ရပျဝေးမှ သတငျးကောငျးကွားရတတျသညျ။ မိတျဆှမြေား၏ ကူညီမှုရရှိမညျ။ စပျတူ လုပျငနျးမြား လုပျရကိနျး ရှိပါတယျ။ သငျတနျးတကျရခွငျး ၊ ဆရာသမားလို ပုဂ်ဂိုလျမြား ကူညီစောငျ့ရှောကျခွငျး ခံရတတျပါသညျ။ ရှဝေယျမညျ့ကိစ်စ ပကျြတတျပါသညျ။ အင်ျဂါ၊ စနသေားသမီး / လူမြိုးခွားတဈဦးကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျမြား ကွုံရတတျပါသညျ။လကျအောကျငယျသား ၊ အလုပျသမားမြားရှိလြှငျ ထှကျသှားတတျပါတယျ။ စကျပစ်စညျး၊ ကား၊ ဖုနျး၊ မွေ ဝငျကိနျး ရှိပါသညျ။ လုပျငနျးရှငျမြား ကားအသဈ ခြိနျးဖွဈတတျပါသညျ။ ငှကေတော့ အဝငျကွမျး အထှကျကွမျး ဖွဈနတေတျပါသညျ။ အိမျထောငျရှိသူမြား အိမျထောငျဘကျနှငျ့ ပတျသကျ၍ စိတျရှုပျရတတျပါသညျ။ ခရီးထှကျမညျ ထှကျမညျဆိုပွီး ခရီးရကျရှရေ့ခွငျး ၊ ကွံကွာခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ သူမြား အမှုအခငျး ပွဿနာမြားကို အကွံပေးဖွရှေငျးပေးရတတျပါသညျ။ ဖွဈနိုငျလြှငျ ဒီတဈလလုံး စနေ၊ ဗုဒ်ဒဟူးနမြေ့ားတှငျ နာရေး လုံးဝ လိုကျမပို့ပါနှငျ့။ စနေ၊ ဗုဒ်ဒဟူးနတှေ့ငျ တောငျအရပျ ခရီး ရှောငျပါ။အရေးကွီး ကိစ်စသှားလြှငျ အစိမျးရောငျ၊ အနကျရောငျ အဝတျအစား ရှောငျပါ။
တဈလတာယတွာ-သောကျွာဂွိုလျဒေါငျ့ဘုရားတှငျ နှငျးဆီပနျး(၁၅)ပှငျ့၊ သဈသီး(၁၅)လုံး ကပျလှူပူဇျောပေးပါ၊၊
ခွေ၊ လကျထိမိခိုကျမိ ဖွတျတတျသဖွငျ့ ဂရုစိုကျပေးပါ။ စိတျထိခိုကျခွငျး၊ စိတျဓာတျကခြွငျးမြား တဈခါတဈရံဖွဈပျေါတတျပါသညျ။ခဈြသူနှငျ့ စကားပွောအဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ မထငျမှတျဘဲ ခရီးတဈခုသှားရတတျသညျ။ ခရီးသှားပွီးပွနျ လာလြှငျ ညံ့နသေောကံမြား ကောငျးသှားတတျပါသညျ။ မွကေိစ်စ၊ ဖုနျးကိစ်စ၊ အမှကေိစ်စ၊ ငှရေေးကွေးရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး စိတျသောကရောကျရတတျပါသညျ။ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး ငှအေထှကျမြားခွငျး၊ ငှကွေေးပေး စရာရှိသညျကို မပေးနိုငျခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ ကား၊ ကှနျပြူတာ၊ ကငျမရာမြား ဝငျကိနျး၊ အဆငျပွကေိနျး ရှိသညျ။ အလှပွငျလုပျငနျး၊ အနုပညာလုပျငနျး၊ လူထုနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျးမြား အဆငျပွအေောငျမွငျကိနျး ရှိပါသညျ။ စပျတူရှယျယာလုပျငနျး၊ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးမြားအလုပျဖွဈပွီး ငှမေကနျြခွငျး၊ ငှစေုမရခွငျး မြားကွုံရတတျပါသညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးလုပျသူမြား ငှရေေးကွေးရေး စကားပွောရတတျသညျ။ အိမျထောငျရှိသူမြား ဆနျးပှငျ့ကိနျးရှိသညျ။ ပညာရေးကံမကောငျးပါ။ သငျတနျးတတျရနျကိစ်စမြား ပကျြသှားတတျပါသညျ။
တဈလတာယတွာ- သကျကွီးရှယျအို အင်ျဂါသားသမီးကို ဖနပျတဈရံနှငျ့ အဖွူရောငျ အင်ျကြီတဈထညျလှူပေးပါ၊၊
စီးပှားရေးလုပျငနျးလုပျရာတှငျ အနောကျမွောကျဒေါငျ့ကို ရှောငျပေးရမညျ၊၊ ထငျထငျရှားရှားအောငျမွငျမညျ့ ကာလဖွဈသညျ၊၊အကွံအစညျမြား အောငျမွငျ ဖွဈထှနျးလှယျမညျ။ ရဲရဲသာလုပျပါ၊၊ တဈခုသတိပွုရမှာ…ငှအေသုံးစှဲဆငျခွငျပါ၊၊ မကုနျသငျ့သညျ့ နရောတှငျ အကုနျမြားလိမျမညျ၊၊ မိမိ၏ ကိုယျပိုငျအတှေးချေါမြားကို လှတျလပျစှာ လုပျဆောငျပါ၊၊ ဝငျရောကျနှောငျ့ယှကျတတျသူမြား ရှိသျောလညျး မိမိကသာအောငျမွငျမှု ရရှိလိမျမညျ တနင်ျလာ၊အင်ျဂါ အမညျရှငျမြားကို သတိထားပါ၊၊ လူငယျလူရှယျမြားအနဖွေငျ့ အရှကျတကှဲ အကြိုးနညျးကိနျးကွုံရတကျသညျ၊၊ အနထေိုငျဆငျခွငျပါ။ ခဈြသူမရှိလြှငျ ခဈြသူရမညျ၊၊ ခဈြသူရှိပါက နီးစပျအဆငျပွသှေားလိမျ့မညျ၊၊ စိတျခမျြးမွစေ့ရာမြားနှငျ့ ပွညျ့စုံမညျ၊၊ ကနျြးမာရေးအနဖွေငျ့…အအေးမိခွငျး၊ခြောငျးဆိုးခွငျး၊အဆုတျပိုငျးဆိုငျရာ၊ အကွောအားနညျးခွငျးမြား ကွုံရတကျသညျ၊၊ (ဒီလထဲတှငျ ငှလေိမျခံရတကျသညျ)
တဈလတာယတွာ- မိမိနအေိမျဘုရားစဉျ၌ သောကျတျောရေ(၉)ခှကျ ပနျးအနီရောငျ(၉)ပှငျ့ ကပျလှူပူဇျောပေးပါ မိမိမှေးနေ့ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျပူဇျောပေးရပါမညျ၊၊.
စိတျရှုပျစရာ၊ စိတျပကျြစရာ၊ စိတျဓာတျကစြရာကိစ်စမြားကွုံတတျသညျ။ သူတဈပါး အထငျလှဲခွငျး၊ မကောငျးပွောခငျြးမြား ခံရကိနျးရှိသညျ။ ခဈြခငျသူမြားနှငျ့မထငျမှတျသာ အကွောငျးအရာမြားကွောငျ့ လမျးခှဲရကိနျးရှိပါသညျ။ တနင်ျလာ၊ အင်ျဂါ၊ ဗုဒ်ဓဟူး ခဈြသူရှိက မထငျမှတျဘဲ အဆငျမပွခွေငျး၊ ပကျြသှားခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ ခဈြသူမရှိသူမြားကတော့ အခဈြသဈတှမေ့ညျ၊။ မိမိထကျငယျရှယျသူမြားနှငျ့အဆငျပွတေတျပါသညျ။ အိမျထောငျရှိသူမြား၊ အိမျထောငျ ရေးအဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ ဆနျးပှငျ့ခွငျးတို့ ကွုံရကိနျးရှိသညျ။ ပညာရေးကံကောငျးပါသညျ။ သငျတနျးကိစ်စ၊ အငျတာဗြူးကိစ်စမြားအဆငျပွအေောငျမွငျကိနျးရှိပါသညျ။ ငှရေေး၊ ကွေးရေးကံကောငျးပါမညျ။ အကွှေးတငျခွငျး၊ အကွှေးပေးစရာရှိခွငျးမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ ငှရေေးကွေးရေးနှငျ့ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီ အထူးဂရုစိုကျရပါမညျ။ အလုပျအကိုငျမြားလညျး အဆငျပွမေလိုလိုနှငျ့အဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ အစိုးရနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျးမြား အောငျမွငျကိနျးရှိပါသညျ။ ငှကွေေးနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျး၊ စကျပစ်စညျးနှငျ့ပတျသကျသောလုပျငနျးလုပျသူမြား ငှကွေေးကံကောငျးမှုအားနညျးတတျပါသညျ။
တဈလတာယတွာ- မိမိ၏မှေးနေ့ ကွာသပတေးနတှေ့ငျ ညောငျပငျမှာ(ရှရေေ-ငှရေေ)လောငျးပေးလိုကျပါ။
ခရီးသှားလုပျငနျး ၊ ဟိုတယျလုပျငနျး ၊ သဈလုပျငနျး ၊ ရှလေုပျငနျး လုပျသူမြား အောငျမွငျမှုရမညျ။ ထှကျထားသော ငှမြေား ပွနျဝငျ ကိနျး ရှိပါသညျ။ ဆှမြေိုးသားခငျြး ၊ အကွီးအကဲကွောငျ့၊ မိတျရငျး ဆှရေငျးကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈရတတျပါသညျ။မိမိ မိတျဆှမြေားထဲမှ လူမြိုးခွား (သို့) စနသေားသမီး တဈဦး အမှုအခငျးကိစ်စ ပျေါတတျပါသညျ။ ငှကွေေး ဝငျသမြှ ငှထှေကျကိနျး ရှိပါသညျ။ ရပျဝေးမှာ မိတျဆှဟေောငျး အကူညီရတကျသညျ။ လုပျငနျးအသဈ တိုးခြဲ့ ရတတျပါသညျ။ လုပျငနျးသဈလုပျရနျ ကွံကွာမှုတှေ ဖွဈရတတျပါသညျ။ သူမြား ကိစ်စမြားကွားမှာ ကွားညှပျတတျပါသညျ။ အိမျထောငျရှိသူမြား စနျးပှငျ့တတျပါသညျ။ တဈခါ တဈခါ အိမျထောငျဘကျအပျေါ စိတျပကျြခွငျး ၊ စိတျအလို မကခြွငျးတို့ ဖွဈရတတျပါသညျ။ ခဈြသူရညျးစားမြား အနနေဲ့ ခဈြသူ၏ စားပွီး နားမလညျ လုပျတာမြိုး ခံရတတျပါသညျ။ ခဈြသူကွောငျ့ စိတျညဈ စိတျရှုပျ စိတျထိခိုကျရမညျ့လ ဖွဈပါသညျ။ ခဈြသူကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြတှငျ မကျြနှာပကျြ၊ မကျြနှာမလှ ဖွဈရတတျပါသညျ။ ခဈြသူသညျ မိမိမဟုတျသော တဈခွား ကောငျမလေး တဈယောကျနှငျ့ တှနေ့သေညျ့ သတငျးကွားရတတျပါသညျ။ ခဈြသူ စနျးပှငျ့လို့ သဝငျတိုခွငျး၊ မခံမရပျနိုငျဖွဈရခွငျးတို့ ဖွဈရမညျ့ကိနျး ရှိပါသညျ။ ဒီလထဲတှငျ ကနျြးမာရေး ကောငျးလိုကျ မကောငျးလိုကျဖွဈလိမျ့မညျ၊၊ (ဒီလထဲတှငျ စကျပစ်စညျး အဝငျမကောငျး၊ မဝယျကောငျး)
တဈလတာယတွာ- အိမျဘုရားမှာ အောငျသပွေ(21)ညှနျ့ ဖယောငျးတိုငျ (21)တိုငျ သဈသီး(21)လုံး ကပျလှူပူဇျောပေးပါ။
ယခုလသညျ စီးပှားသိသိသာသာ တိုးတကျအောငျမွငျမညျ။လုပျငနျးမြား သိသိသာသာ အောငျမွငျမူရမညျ။ ဘုရားဖူးခရီးမြား စိတျခမျြးသာစရာခရီးမြား ပွညျတှငျးပွညျပခရီးမြား သှားတတျပါသညျ။ ဝနျထမျးဖွဈလြှငျ ရာထူးတကျခွငျး အခွအေနအေဆငျ့အတနျး မွငျ့တကျခွငျးမြားကွုံမညျ။ သငျတနျးတဈခု တကျရခွငျး ပညာကောငျး ရခွငျးမြား ကွုံမညျ။ မိတျဆှကေောငျး ဆရာကောငျမြား တှမေ့ညျ။ အဖိုးတနျစကျပစ်စညျမြားဝငျမညျ။ မွကေိစ်စမြား အဆငျပွမေညျ။ ငှရှောရလှယျခွငျး ငှအေဝငျအထှကျ ကွမျးခွငျးမြားကွုံလိမျ့မညျ။ ရပျဝေးမှစာမြား အဆကျအသှယျမြား ရလာမညျ။ အထူးသတိပွုရနျ – ကနျြးမာရေး ဂရုစိုကျပေးပါ။ တုတျကှေး၊ အစာအိမျ ၊ လေးဘကျနာဖွဈလို့ ဆေးခနျး ပွရတတျပါသညျ။ အိမျထောငျရှိသူဆိုလြှငျ အိမျထောငျဖကျ အတှကျ စိတျညဈရတတျသညျ။ မထငျမှတျပဲ အမှုအခငျး ပွဿနာနဲ့ ကွုံတှေ့၇တတျပါတယျ။ ဒီလ စနနေေ့ ဗုဒ်ဒဟူးနမြေ့ားတှငျ နာရေး အသုဘပို့ခွငျး မပွုပါနှငျ့ အထူးသတိပွုပါ။ နောကျ အိမျထောငျထောငျရှိသူမြား မိမိသောလညျးကောငျး/ အိမျထောငျဘကျသျော လညျးကောငျး စနျးပှငျ့ကိနျးရှိပါတယျ။ ထိုကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး မိသားစု အကွီးကဲနှငျ့ စကားပွောရကိနျးရှိပါသညျ။ သမီးရညျးစားမြား အခဈြရေး ကံကောငျးနတေတျပါသညျ။ မကွာခဏ စကားပွောအဆငျမပွသေညျကလှဲပွီး ကံကောငျးတတျပါသညျ။ ဖွတျသှားသောသူမြားပွနျလာကိနျးလညျးရှိသော ကာလဖွဈပါသညျ။ ကနျြးမာရေး အနနေဲ့ကတော့ နှလုံးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကနျြးမာရေးညံ့ခွငျး။ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြား ပျေါလိမျ့မညျ။ လုပျလြှငျအောငျမွငျမညျ။ အမြိုးသား စနျးပှငျ့ ကိနျးရှိလို့ သတိထားပါ။
တဈလတာယတွာ- စနဂွေိုဟျနံဘုရားမှာ ပနျးအဝါရောငျ(10)ပှငျ့ ထောပတျဆီမီးခှကျ(3)ခှကျ ပူဇျောပေးပါ။
Credit- ဆရာမငျးသုခ 09-440243656
ဤ အချိန်သည် အမှားအမှန်၊ အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြားရခက်သောကာလ ဖြစ်သည်၊၊ ရှေ့တိုးရအခက်၊ နောက်ဆုတ်ရအခက် ပြဿနာများ ကြုံရတက်သည်။ အရာရာသတိထား၍ လုပ်ကိုင်မှ တော်ကာကြသည်၊၊ ယခုချိန်မှစ၍ မိမိလုပ်ဆောင်မည့်အရာအားလုံးကို အကွက်ချပီး လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားသင့်သည်၊၊ မိမိ၏ ဇွဲ၊ လုံ့လပေါ်မူတည်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်၊၊ စကားအပြောဆို ဆင်ခြင်သတိပြုရပါမည်၊၊ နှုတ်ကြောင့်သေ၊ လက်ကြောင့်ကြေ…တတ်သော ကာလဖြစ်၍ နှုတ်မထိန်းပါက ကြီးစွာသော ဥပဒ်ဖြစ်တက်သည်၊၊ ငွေများဝင်သောလည်း အဖတ်မတင်တက်ပေ၊၊ အလိုလိုနေရင်း စိတ်အားငယ်တက်သောစိတ်၊ တက်လွယ်ကျလွယ်သောစိတ်ကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပါလေ။ မိမိ မလုပ်ချင် မဖြစ်ချင်သောကိစ္စကို တစ်စုံတစ်ယောက်မှ အတင်းအကြပ်၊ ဇွတ်လုပ်ခိုင်းချင်းခံရတက်သည်၊၊ လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်…မချစ်သင့်သူကို ချစ်ခြင်း၊ အချစ်မှား ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခြင်းများကြောင့် မလိုလားအပ်သောပြဿနာများနှင့် ထိပ်တိုက်ကြုံရတက်သည်၊၊ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်…အနေအထိုင် မဆင်ခြင်မှုကြောင့် ရောဂါဝေဒနာများကြရောက် တက်သည်၊၊မျက်စိ၊မျက်နှာ၊မျက်လုံးနဲ့ပက်သတ်ပီး ဂရုစိုက်ရပါမည်၊၊
တစ်လတာယတြာ- အိမ်ဘုရားမှာ ထောပတ်ဆီမီးခွက် ၃ခွက် ပူဇော်ပေးပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စာသင်ကျောင်းများတွင် ရေအိုးစဉ်လှူပေးလိုက်ပါ၊၊
အိမ်အသစ်ဆောက်မည့်ကိစ္စ အဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ ရပ်ဝေးမှ သတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေများ၏ ကူညီမှုရရှိမည်။ စပ်တူ လုပ်ငန်းများ လုပ်ရကိန်း ရှိပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရခြင်း ၊ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။ ရွှေဝယ်မည့်ကိစ္စ ပျက်တတ်ပါသည်။ အင်္ဂါ၊ စနေသားသမီး / လူမျိုးခြားတစ်ဦးကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်များ ကြုံရတတ်ပါသည်။ လက်အောက်ငယ်သား ၊ အလုပ်သမားများရှိလျှင် ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်း၊ ကား၊ ဖုန်း၊ မြေ ဝင်ကိန်း ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များ ကားအသစ် ချိန်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ ငွေကတော့ အဝင်ကြမ်း အထွက်ကြမ်း ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါသည်။ ခရီးထွက်မည် ထွက်မည်ဆိုပြီး ခရီးရက်ရွှေ့ရခြင်း ၊ ကြံကြာခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ သူများ အမှုအခင်း ပြဿနာများကို အကြံပေးဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒီတစ်လလုံး စနေ၊ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့များတွင် နာရေး လုံးဝ လိုက်မပို့ပါနှင့်။ စနေ၊ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တွင် တောင်အရပ် ခရီး ရှောင်ပါ။အရေးကြီး ကိစ္စသွားလျှင် အစိမ်းရောင်၊ အနက်ရောင် အဝတ်အစား ရှောင်ပါ။
တစ်လတာယတြာ-သောကြာ်ဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားတွင် နှင်းဆီပန်း(၁၅)ပွင့်၊ သစ်သီး(၁၅)လုံး ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ၊၊
ခြေ၊ လက်ထိမိခိုက်မိ ဖြတ်တတ်သဖြင့် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ စိတ်ထိခိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းများ တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ချစ်သူနှင့် စကားပြောအဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ခရီးတစ်ခုသွားရတတ်သည်။ ခရီးသွားပြီးပြန် လာလျှင် ညံ့နေသောကံများ ကောင်းသွားတတ်ပါသည်။ မြေကိစ္စ၊ ဖုန်းကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ၊ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်သောကရောက်ရတတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငွေအထွက်များခြင်း၊ ငွေကြေးပေး စရာရှိသည်ကို မပေးနိုင်ခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ကား၊ ကွန်ပျူတာ၊ ကင်မရာများ ဝင်ကိန်း၊ အဆင်ပြေကိန်း ရှိသည်။ အလှပြင်လုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်း၊ လူထုနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်း ရှိပါသည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအလုပ်ဖြစ်ပြီး ငွေမကျန်ခြင်း၊ ငွေစုမရခြင်း များကြုံရတတ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ငွေရေးကြေးရေး စကားပြောရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ ဆန်းပွင့်ကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးကံမကောင်းပါ။ သင်တန်းတတ်ရန်ကိစ္စများ ပျက်သွားတတ်ပါသည်။
တစ်လတာယတြာ- သက်ကြီးရွယ်အို အင်္ဂါသားသမီးကို ဖနပ်တစ်ရံနှင့် အဖြူရောင် အင်္ကျီတစ်ထည်လှူပေးပါ၊၊
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် အနောက်မြောက်ဒေါင့်ကို ရှောင်ပေးရမည်၊၊ ထင်ထင်ရှားရှားအောင်မြင်မည့် ကာလဖြစ်သည်၊၊အကြံအစည်များ အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းလွယ်မည်။ ရဲရဲသာလုပ်ပါ၊၊ တစ်ခုသတိပြုရမှာ…ငွေအသုံးစွဲဆင်ခြင်ပါ၊၊ မကုန်သင့်သည့် နေရာတွင် အကုန်များလိမ်မည်၊၊ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်များကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်ပါ၊၊ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်တတ်သူများ ရှိသော်လည်း မိမိကသာအောင်မြင်မှု ရရှိလိမ်မည် တနင်္လာ၊အင်္ဂါ အမည်ရှင်များကို သတိထားပါ၊၊ လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းကိန်းကြုံရတက်သည်၊၊ အနေထိုင်ဆင်ခြင်ပါ။ ချစ်သူမရှိလျှင် ချစ်သူရမည်၊၊ ချစ်သူရှိပါက နီးစပ်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မည်၊၊ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများနှင့် ပြည့်စုံမည်၊၊ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်…အအေးမိခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊အဆုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အကြောအားနည်းခြင်းများ ကြုံရတက်သည်၊၊ (ဒီလထဲတွင် ငွေလိမ်ခံရတက်သည်)
တစ်လတာယတြာ- မိမိနေအိမ်ဘုရားစဉ်၌ သောက်တော်ရေ(၉)ခွက် ပန်းအနီရောင်(၉)ပွင့် ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ မိမိမွေးနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပူဇော်ပေးရပါမည်၊၊.
စိတ်ရှုပ်စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာကိစ္စများကြုံတတ်သည်။ သူတစ်ပါး အထင်လွှဲခြင်း၊ မကောင်းပြောချင်းများ ခံရကိန်းရှိသည်။ ချစ်ခင်သူများနှင့်မထင်မှတ်သာ အကြောင်းအရာများကြောင့် လမ်းခွဲရကိန်းရှိပါသည်။ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ချစ်သူရှိက မထင်မှတ်ဘဲ အဆင်မပြေခြင်း၊ ပျက်သွားခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ချစ်သူမရှိသူများကတော့ အချစ်သစ်တွေ့မည်၊။ မိမိထက်ငယ်ရွယ်သူများနှင့်အဆင်ပြေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ၊ အိမ်ထောင် ရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ ဆန်းပွင့်ခြင်းတို့ ကြုံရကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးကံကောင်းပါသည်။ သင်တန်းကိစ္စ၊ အင်တာဗျူးကိစ္စများအဆင်ပြေအောင်မြင်ကိန်းရှိပါသည်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးကံကောင်းပါမည်။ အကြွေးတင်ခြင်း၊ အကြွေးပေးစရာရှိခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီ အထူးဂရုစိုက်ရပါမည်။ အလုပ်အကိုင်များလည်း အဆင်ပြေမလိုလိုနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ကိန်းရှိပါသည်။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ငွေကြေးကံကောင်းမှုအားနည်းတတ်ပါသည်။
တစ်လတာယတြာ- မိမိ၏မွေးနေ့ ကြာသပတေးနေ့တွင် ညောင်ပင်မှာ(ရွှေရေ-ငွေရေ)လောင်းပေးလိုက်ပါ။
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ၊ သစ်လုပ်ငန်း ၊ ရွှေလုပ်ငန်း လုပ်သူများ အောင်မြင်မှုရမည်။ ထွက်ထားသော ငွေများ ပြန်ဝင် ကိန်း ရှိပါသည်။ ဆွေမျိုးသားချင်း ၊ အကြီးအကဲကြောင့်၊ မိတ်ရင်း ဆွေရင်းကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။မိမိ မိတ်ဆွေများထဲမှ လူမျိုးခြား (သို့) စနေသားသမီး တစ်ဦး အမှုအခင်းကိစ္စ ပေါ်တတ်ပါသည်။ ငွေကြေး ဝင်သမျှ ငွေထွက်ကိန်း ရှိပါသည်။ ရပ်ဝေးမှာ မိတ်ဆွေဟောင်း အကူညီရတက်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ် တိုးချဲ့ ရတတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန် ကြံကြာမှုတွေ ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။ သူများ ကိစ္စများကြားမှာ ကြားညှပ်တတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ စန်းပွင့်တတ်ပါသည်။ တစ်ခါ တစ်ခါ အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ် စိတ်ပျက်ခြင်း ၊ စိတ်အလို မကျခြင်းတို့ ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။ ချစ်သူရည်းစားများ အနေနဲ့ ချစ်သူ၏ စားပြီး နားမလည် လုပ်တာမျိုး ခံရတတ်ပါသည်။ ချစ်သူကြောင့် စိတ်ညစ် စိတ်ရှုပ် စိတ်ထိခိုက်ရမည့်လ ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်သူကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မျက်နှာပျက်၊ မျက်နှာမလှ ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။ ချစ်သူသည် မိမိမဟုတ်သော တစ်ခြား ကောင်မလေး တစ်ယောက်နှင့် တွေ့နေသည့် သတင်းကြားရတတ်ပါသည်။ ချစ်သူ စန်းပွင့်လို့ သဝင်တိုခြင်း၊ မခံ မရပ်နိုင်ဖြစ်ရခြင်းတို့ ဖြစ်ရမည့်ကိန်း ရှိပါသည်။ ဒီလထဲတွင် ကျန်းမာရေး ကောင်းလိုက် မကောင်းလိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်၊၊ (ဒီလထဲတွင် စက်ပစ္စည်း အဝင်မကောင်း မဝယ်ကောင်း)
တစ်လတာယတြာ- အိမ်ဘုရားမှာ အောင်သပြေ(21)ညွန့် ဖယောင်းတိုင် (21)တိုင် သစ်သီး(21)လုံး ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ။
ယခုလသည် စီးပွားသိသိသာသာ တိုးတက်အောင်မြင်မည်။လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူရမည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများ သွားတတ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူးတက်ခြင်း အခြေအနေအဆင့်အတန်း မြင့်တက်ခြင်းများကြုံမည်။ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်း ပညာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။ မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်များ တွေ့မည်။ အဖိုးတန်စက်ပစ္စည်များဝင်မည်။ မြေကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအဝင်အထွက် ကြမ်းခြင်းများကြုံလိမ့်မည်။ ရပ်ဝေးမှစာများ အဆက်အသွယ်များ ရလာမည်။ အထူးသတိပြုရန် – ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပေးပါ။ တုတ်ကွေး၊ အစာအိမ် ၊ လေးဘက်နာဖြစ်လို့ ဆေးခန်း ပြရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဖက် အတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ မထင်မှတ်ပဲ အမှုအခင်း ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့၇တတ်ပါတယ်။ ဒီလ စနေနေ့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့များတွင် နာရေး အသုဘပို့ခြင်း မပြုပါနှင့် အထူးသတိပြုပါ။ နောက် အိမ်ထောင်ထောင်ရှိသူများ မိမိသောလည်းကောင်း/ အိမ်ထောင်ဘက်သော် လည်းကောင်း စန်းပွင့်ကိန်းရှိပါတယ်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိသားစု အကြီးကဲနှင့် စကားပြောရကိန်းရှိပါသည်။ သမီးရည်းစားများ အချစ်ရေး ကံကောင်းနေတတ်ပါသည်။ မကြာခဏ စကားပြောအဆင်မပြေသည်ကလွဲပြီး ကံကောင်းတတ်ပါသည်။ ဖြတ်သွားသောသူများပြန်လာကိန်းလည်းရှိသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ကတော့ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လိမ့်မည်။ လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည်။ အမျိုးသား စန်းပွင့် ကိန်းရှိလို့ သတိထားပါ။
တစ်လတာယတြာ- စနေဂြိုဟ်နံဘုရားမှာ ပန်းအဝါရောင်(10)ပွင့် ထောပတ်ဆီမီးခွက်(3)ခွက် ပူဇော်ပေးပါ။
Credit- ဆရာမင်းသုခ 09-440243656